Dhoofinta | December 2019
Ugu Weyn Ee Dhoofinta
Shiinaha ayaa noqday lamaanaha ugu weyn ee cunnada Ruushka ah.
Shiinaha ayaa u gudubtay Turkiga waxaanay noqdeen kuwa ugu wanaagsan ee dhoofiya cuntooyinka Ruushka. Dhammaadka sannadka 2016, wadarta cuntada dhoofinta ee Shiinaha waxay ahayd in ka badan $ 1 bilyan. Ruushku wuxuu haystaa fursad kasta oo uu ku noqon karo mid ka mid ah iibiyeyaasha muhiimka ah ee Shiinaha, oo ay weheliyaan USA, Brazil, Australia, Thailand iyo dalal kale.
Dhoofinta saliideedka Ruushka ayaa rikoor kale ku dhuftay
Sida laga soo xigtay xogta ay bixiyeen falanqeeyayaasha APK-Inform, afartii bilood ee ugu horreeyay 2016-2017 (Sebtembar-Disembar), Ruushka ayaa dhoofiyay rikoodhkii saliidda qorraxda - 704,000 tan (oo ay ku jirto dalalka Midowga Yurub), taasina waxay muujineysaa koror 1, 5 jeer marka la barbardhigo isla xilli-ciyaareedkii hore (458,000 tan).
By 2020, Belarus waxay kordhin doontaa dhoofinta dalagga beeraha ilaa $ 500 million
Ilaa sannadka 2020, Belarus waxay qorsheyneysaa in ay kor u qaado dhoofinta dalagyada beeraha ilaa $ 500 milyan, sida uu sheegay madaxa waaxda dhaqaalaha ee Wasaaradda Beeraha iyo Cuntada Jamhuuriyadda Belarus, Aleksey Bogdanov, 16-kii Febraayo. Sannadka 2016, dhoofinta alaabada dhirta ayaa gaadhay heer 380 milyan oo doolar ah, sannadka 2020na waddanku waa inuu gaaraa 500 milyan oo doolar.
Rusagrotrans ayaa hoos u dhigtay saadaasha hadhuudhka miraha laga soo bilaabo Russia bishii Febraayo-Maarso
Falanqeeyayaasha CJSC Rusagrotrans waxay hoos u dhigeen saadaasha khudaarta Ruushka ee Febraayo 2017 ilaa 1.8-2 milyan oo ton, taasoo la barbardhigay saadaashii hore, oo ahayd 2.3-2.4 milyan oo tan. Intaa ka sokow, miisaanka dhoofinta ayaa aad hoos ugu dhacaya marka la barbardhigo isla bishaas sannadkii hore, sida lagu dhawaaqay Febraayo 20 by Agaasime Ku-xigeenka Suuqgeynta Suuq-galka iyo Isgaadhsiinta shirkadaha Rusagrotrans, Igor Pavensky.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Dhoofinta 2019